Nyowani iMac Pro, chikara chitsva chaApple | Ndinobva mac
Nyowani iMac Pro, chipuka chitsva chaApple
Chishamiso chinouya muchimiro cheMac uye yakasviba muvara. Iyi ndiyo iMac Pro nyowani, iMac Apple ine simba kwazvo yakambogadzirwa. Yakagadzirwa muhukuru hwakakanganikwa hweApple ye27 ″, maficha ayo akagadzirirwa kuda iyo yakakwira, sezvo iine yakanakisa processor pamusika, pamwe neinotevera-chizvarwa kubatana uye nemutengo wekutanga we $ 4999.
Chigadzirwa chitsva ichi chichatanga kutengeswa muna Zvita wegore rino, kana zvese zvikaenda sekufungidzirwa neveCupertino-based guys. Dhizaini yaro, senge iMac yapfuura, ikozvino inoratidza yakasviba, ingangoita yakajeka dhizaini dhizaini, zvese zviri zviviri uye mbeva nekhibhodi inoipedzisa.
Iyo iMac nyowani yakagadzirwazve kuti ive yakasimba kwazvo komputa pamusika. Iyo processor inogadzira 18 nuclei, mhuka chaiyo. Uye zvakare, inokwidza Radeon Vega GPU, imwe yeane simba kwazvo pamusika. Apple inovimbisa kuti ndiyo Mac ine simba kwazvo kusvika parizvino, pamberi pa2013 Mac Pro pakumisikidzwa kwayo kwepamusoro.
Iyo dhizaini, mune yesimbi nhema, inoyeuchidza chaizvo yazvino vhezheni yeiyo iPhone. Isu tatoziva kuti Apple iri sei kana zvasvika kune dhizaini yezvigadzirwa zvayo.
Dambudziko, semazuva ese, ndiwo mutengo. Asi kunyangwe $ 4999 ingaite kunge yakapenga kwatiri, Apple inova nechokwadi chekuti iyi iMac Pro nyowani Izvo zvakanaka pamusoro pemakomputa akajairwa ane akafanana mawedzero, ayo akakosha kutenderedza $ 7000.
Semazuva ese, isu tinofanirwa kumirira kuti tirambe tichidzidza nhau nezvechikara chitsva chekambani yeNorth America.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » IMac » Nyowani iMac Pro, chipuka chitsva chaApple
ne850 madhora approx. unogona kusarudza 16-core Ryzen Threadripper ine makumi matatu neshanu yakasara yacho nhoroondo ... senguva dzose Apple inowedzera mitengo, asi $ 32? kupenga kuri pachena
Pindura kuna dijkstra
AR inova chaiyo kuApple
IMac, MacBook uye MacBook Pro renji yakavandudzwa